पूर्वयुवराज पारस को सम्बन्ध समलिंगी युवतीसंग ? सोनीका भन्छिन्, ‘ मेरो पहिले केटि संग प्रेम थियो अहिले छुट्यो’ (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/पूर्वयुवराज पारस को सम्बन्ध समलिंगी युवतीसंग ? सोनीका भन्छिन्, ‘ मेरो पहिले केटि संग प्रेम थियो अहिले छुट्यो’ (भिडियो)
यसअघि पनि सोनिकाले पारससँगका कैयन् पटक तस्वीर शेयर गर्ने गरेका थिए । सोनिकाका अनुसार यी दुई ३ महिनादेखि नजिक छन् । यता सोनिकाले पारसलाई एक अभिभावकझैँ केयर गर्ने मिल्ने साथी भएको दाबी गरेकी छिन् । खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा सोनिकाले भनिन्, ‘पारस सरकारका कारण ममा चेन्ज धेरै आध्यात्मिक चेन्ज आएको छ, उहाँ मेरो मिल्ने साथी हो ।’
टिकटकमा पूर्वयुवराज पारस र सोनिकाको एक भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पारसको विरोध शुरु भएको थियो । सुमन नामक युवकले टिकटकमा १५ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । भिडियोमा पारस शाहले बाइकमा सोनिकालाई कुरिरहेका हुन्छन् । पोखरामा खिचिएको उक्त भिडियोमा पारसले केही नेपालीलाई राजावादी भनेर नछुट्याउन र सबैलाई नेपाली भन्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘यो वादी र ऊ वादी भनेर छुट्याउने होइन, हामी सबै नेपाली हो ।’
राजावादी र नेपालीबीचको कुरा चलिरहँदा युट्युबर सोनिका रोकाया बाइक नजिक आउँछिन् । लगत्तै पारसले बाइक स्टार्ट गर्छन् । र, दुवै हुइँकिन्छन् । यता सोनिकाले आफूले बिल तिरेर भित्रबाट आएको र कसैले लुकेर भिडियो खिचेको आफूहरुले थाहा नपाएको बताइन् । ‘म रेष्टुरेन्टबाट बिल तिरेर निस्किरहेकी थिएँ, हामीले ड्रिङ्क गरेर निस्किरहेका थियौँ, उहाँले बाहिर केही राजावादीलाई यो वादी र ऊ वादी नभन्नु भन्नुभएको रहेछ,’ खबरहबसँगको कुराकानीमा सोनिकाले भनिन्, ‘मलाई के थाहा त्यहाँ क्यामेराले खिचिरहेको छ भनेर, म त बिल तिरेर बाहिर आएँ, म उहाँसँग आएको थिएँ भने उहाँसँगै जान्छु नि ।’ उनले सोही होटलमा बसेर टिकटक भिडियो बनाएर आफूले अपलोड गरेको पनि बताइन् ।
झापा तना’वग्रस्त, सशस्त्र प्रहरीको गो’ली लागेर १ जनाको मृ’त्यु (भिडियो)
छोरा बिदेश छ बुहारीले एता भुडी बोकिन कस्को हो भन्दा कुटेर यस्तो गराईन । (हेर्नुहोस भिडियो)